अञ्जु पन्त यस कारण बनिन् हिन्दूबाट किस्चियन
मिठो स्वरकी धनी गायिका अञ्जु पन्त हिन्दु धर्म त्यागेर क्रिश्चियन भएको केही वर्ष भयो । अहिले उनी समय मिलेसम्म चर्चमा जान्छिन् । क्रिश्चियन धर्म अनुसार गर्नुपर्ने सबै कर्म पुरा गर्छिन् । धर्म परिवर्तन गरेको भन्दै उनको आलोचना पनि भयो । उनी भन्छिन् ‘म रहरले होईन वाध्यताले क्रिश्चियन भएँ ।’ उनको अनुसार उनी गायनमा चरमोत्कर्षमा थिईन् । भ्याई नभ्याई हुन्थ्यो । बिहानदेखि साँझसम्म स्टुडियोमै बिताउथिन् । एक्कासी बिरामी भईन् । धेरै… पुरा पढौ
‘दाल भात तरकारी’को आइटम गीतमा प्रियंकाको जादु !
अर्को शुक्रबारबाट रिलिज हुने फिल्म ‘दाल भात तरकारी’को आइटम गीत सार्वजनिक भएको छ । ‘एन्टिवायोटिक खाउँला’ बोलको गीतमा अभिनेत्री प्रियंका कार्कीको बोल्ड नृत्य गरेकी छन् । मिना निरौलाको स्वर रहेको गीतमा शब्द बरिष्ठ हाँस्यकलाकार हरिवंश आचार्यको छ । संगीत भने शम्भुजित बाँस्कोटाले भरेका हुन् । गीतको भिडियो चितवनमा खिचिएको हो । फिल्ममा हरिवंश आचार्य, निरुता सिंह, पुष्प खड्का र आँचल शर्मा लिड रोलमा छन् । फिल्मको केही पहिले ‘भिजिट भिषामा’… पुरा पढौ
दक्षिण कोरिया पुग्यो साइली
भोजपुर परिवार दक्षिण कोरियाले चलचित्र 'साँईली' कोरियामा प्रदर्शन गर्ने भएको छ । प्रदर्शनको छोटो समयमा नै सर्वाधिक सफल चलचित्र 'साँईली' आउँदो मे १२ तारिख आईतबारका दिन कोरियाको दोङदेमुन seongbuk District Hall मा प्रदर्शन हुने भएको हो । सन २००५ मा स्थापना भएको सम्पूर्ण कोरियावासी भोजपुरेहरुको साझा संस्था 'भोजपुर परिवार दक्षिण कोरियाले' भोजपुरका जिल्लाका गरिव तथा जेहेन्दार बिद्यार्थीका लागि छात्राबृत्ती कोष निमाणार्थ प्रदर्शन गर्न लागेको साईंली चलचित्रको प्रदर्शनलाई लिएर कोरियावासी नेपाली… पुरा पढौ
लोग्ने खाडीमा कमाउने, स्वास्नी अर्कैसँग रमाउने ! (भिडियोसहित)
चर्चित लोकदोहोरी गायक विष्णु खत्रीको नयाँ गीत बिचल्ली सार्वजनिक भएको छ। लामो समय पछि बिष्णुले आफ्नै स्वर, शब्द र संगीतमा उक्त गीत बजारमा ल्याएका हुन्। सामाजिक यथार्थता बोकेको गीत ुबिचल्लीु गीतमा खत्री र देवी घर्तिको आवाज छ। वैदेशीक रोजगारमा जाने सयौ नेपाली युवाले भोग्नु परेको छ कहालीलाग्दो अवस्थालाई गीत संगीतको माध्यमबाट उतार्ने जमर्को गरेका छन्। सुजन शाहिको सम्पादनमा तयार भएको गीतलाई दिलिप रेग्मीले निर्देशन गरेका हुन्। मरुभूमि नारायणले छायांकन गरेको… पुरा पढौ
नाइटो: व्याक्टेरियाको घर
नाइटोः मानव जीवनमा महत्वपूर्ण हिस्सा राख्ने अंग । जीवनको शुरुवातमा आमाको पेटबाट बच्चासम्म खाना पुर्याउने नलीको प्रवेशद्वार र वयस्क भइसकेपछि कतिपय मानिसहरुका लागि त सौन्दर्यका प्रतिविम्बन पनि । तर त्यही महत्वपूर्ण अंग चाहिँ व्याक्टेरियाको घर पनि हो भन्ने कुरा शायद हामीमध्ये कतिपयलाई थाहा नहुन पनि सक्छ । वैज्ञानिकहरुका अनुसार, मानिसको नाइटो व्याक्टेरियाको घर पनि हो । त्यसबारेमा गरिएको एक अनुसन्धानमा संलग्न ६० जना स्वयंसेवीहरुको नाइटोमा २३६८ प्रजातिका व्याक्टेरियाहरु फेला पारेका… पुरा पढौ
समलिङ्गीहरुले कसरी यौन प्यास मेट्छन
शारीरिक अंग, हार्मोन, शारीरिक तथा मानसिक अवस्थाका कारण नै पुरुष–पुरुष र महिला–महिलाका रुपमा छुट्टिन्छन्।महिला र पुरुष मस्तिस्क पनि फरक फरक हुन्छ। समलैङिगकतालाई धेरैले एउटा रोगको रुपमा मान्ने गरेका छन्।पछिल्लो समय नेपालमा पनि लैङिगक अल्पसंख्यकहरुको अधिकारका बारेमा राम्रै प्रचारप्रसार भएकोले तिनको यौनजीवनबारे धेरैको चासो बढ्न थालेको छ। डा.दिनेश बाँस्तोलाका अनुसार नेपालमा समलिङ्गी, द्विलिङ्गी र तेश्रो लिङ्गको संख्या कुल जनसंख्याको करिब १० प्रतिशत छ।महिला र पुरुष दुबै समलिङ्गी हुन्छन्। महिला समलिङगी महिलासँगै… पुरा पढौ
खुत्रुके घाँटीजस्तो टाउको अनि मुखजस्तो दुलो हेर्दाखेरि पुड्के पुड्के भुँडी मात्रै ठूलो भोको छ कि अघाको छ केही थाहा छैन भित्र धेरै अँधेरो छ, हेर्दा देखिँदैन सानो भाइले पिरोलेर किन्दिनु भो बाले यो खुत्रुके कस्तो लाग्यो भन्देऊ बाबु लाले कुमालेले बनाएछन् माटो पोली बोक्रो कसो गरी बन्यो कुन्नि भित्रपट्टि खोक्रो ? हात-खुट्टा केही छैन न त नाक् छ कान छ खुवाउँदै जानुपर्ला जैलेसम्म खान्छ "टेबुलतिर छरिएका मोहर र सुका मिल्काउनु… पुरा पढौ
पहिलो पटक सेक्स गर्दा गर्भ रहँदैन ?जानकारी लिनुहोस् ।
हाम्रो नेपाली समाज अझैपनि रुढीबादी सोचले ग्रसित छ सेक्सका बारेमा कुरा गर्नु, जानकारी लिनु भनेको त्यति सहज छैन । धेरै जसो जानकारी कोर्स बाहिरको कुरा पढेर वा परेरै जान्नु पर्ने हुन्छ । नेपाली समाजमा सेक्स सम्बन्धी केही भ्रम छन् जानकारी लिनुहोस । योनीमा लिङ्ग प्रवेश नगरेमा गर्भवती हुँदैन गर्भवती हुन लिंग योनी भित्र छिराउनु नै पर्छ भन्ने छैन । महिलाको योनीको वरिपरी बिर्य झारेमा पनि गर्भवती हुने उत्तिकै सम्भावना हुन्छ… पुरा पढौ
नेपालको जनसंख्याभन्दा ३ गुणा बढीले हेरे कटुमा कुटु
नेपाली सिनेमा क्षेत्रमा यतिबेला लोकशैलीका गीतहरुको बाहुल्यता ह्वात्तै बढेको छ । ती गीतहरु दर्शक तथा श्रोताहरुले निकै रुचाएका पनि छन् । तीनै गीतमध्य सर्वाधिक रुचाईएको गीत हो “कुटुमा कुटु” “२ रुपैयाँ” फिल्ममा समाबेश उक्त गीतमा राजनराज सिवाकोटीको शब्द र संगित रहेको छ भने राजनराज र मेलिना राईको आवाज रहेको छ । स्वस्तिमा खड्का , आफिस शाह , निश्चल बस्नेत र बुद्धी तामाङ फिचर्ड रहेको यस गीतले रेकर्डमाथि रेकर्ड बनाईरहेको छ… पुरा पढौ
विराजले मागे माफी
साङलो फिल्म निर्माण एवं निर्देशन गर्न लागेका नायक बिराज भट्टले सोमबार साँझ कुटपिट गरेका निर्माण नियन्त्रक शंकर पाण्डेसंग माफी मागेका छन् । नायक र प्राविधिकबीचको विवाद सुल्झ्याउन मंगलवार दिउँसो चलचित्र प्राविधिक संघले बोलाएको बैठकमा बिराजले माफी मागेका हुन् । बिराजले पाण्डेमाथि हात हाल्नु आफनो गल्ती भएको भन्दै माफी मागेका हुन् । उनले फिल्मका निर्माण नियन्त्रक शंकर पाण्डेलाई कुटेर भुईमा ढालेका हुन् । लामो समयदेखि उनी साङलोको सुटिङका लागि तयारी गरिरहेका… पुरा पढौ